Uru na ọghọm nke Social Media Marketing | Martech Zone
Sọnde, Septemba 21, 2014 Douglas Karr
Mbido nke infographic bụ ezi ihe na ihe ojoo, mana amaghim na ihe ahu eriri ntu ahu n’isi. Uru (dị mma) bụ ọnụ ọgụgụ ziri ezi niile na-akwado mbọ mgbasa ozi mgbasa ozi, mana ndị na-ekwu maka ọdịiche na nghọta, atụmatụ na nyocha karịa ịre ahịa na onye na-ajụ ya. Ka anyị were ha n’otu n’otu.
50% nke C-Suite ekwenyeghi nke uru mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a nwere ike ịbụ ọtụtụ nsogbu. Ndị ọrụ ahụ nwere ike ọgaghị anọ na-atụle mmetụta ya n'ụzọ ziri ezi ma na-enye akụkọ kwesịrị ekwesị na C-Suite ha. Ha nwekwara ike ọ gaghị amata mmetụta dị ogologo nke iso ndị na-ege gị ntị na-ekwurịta okwu nke ọma uru ndị ka sie ike ịtụ.
Mgbasa mgbasa ozi naanị maka 1.14% nke azụmahịa e-commerce niile. Ana m akpọ ụgha na nke a maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Nke mbu, otutu ndi mmadu na-eji ngwa ha emekorita ndi mmadu. Nke a abụghị obere ọnụ ọgụgụ… ruo 90% nke gị enwere ike ịghara ịtụle ntanetị mgbasa ozi na nyocha n'ihi na ha na-abịa na njikọ kpọmkwem site na ngwa. Ghara ikwu mmetụta na nchọpụta nke mgbasa ozi na-enye. Ntughari nwere ike ọ gaghị eme site na mmekọrịta mmekọrịta - mana onye ọ bụla maara nke ahụ Okwu Ọnụ nwere mmetụta dị ukwuu na ngwaahịa na ọrụ anyị na-azụ - na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ WOM.
85% nke ụlọ ọrụ anaghị ejikọ ọrụ mmekọrịta na nsonaazụ azụmaahịa. Dị ka # 1, nke a abụghị ihe ọjọọ banyere mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta, nke a bụ nsogbu ụlọ ọrụ dị n'ime. Ikike ikwurita okwu nke ọma, itinye aka, zụlite, bulie elu, nakọtara nzaghachi ma nyekwa ndị ahịa gị aka nke ọma bụ ịrụ ọrụ nke ọma na mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anaghị enye gị nsogbu, nke ahụ bụ nsogbu ha… abụghị nsogbu nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Email ka karịa mgbasa ozi mmekọrịta karịa usoro ntụgharị 40 ruo 1. O doro anya na… ma ọ bụrụ na ị nwere adreesị ozi-e mmadụ, nke ahụ pụtara na gị na ha enweela mmekọrịta! Social na-enye ohere iji wulite mmekọrịta iji kpokọta adreesị email! Anyị na-ekekọrịta ihe ndị a na Martech na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ebe ha na-ekerịta… mgbe ahụ ndị mmadụ na-abata na saịtị anyị ma debanye aha na email! Nweghị ike iji apụl na oroma dịka nke a.
Mmemme mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze bụ CMOs '6th ranking ranking (58 percent). Nke mbụ ha na - emeziwanye usoro na ịgagharị agagharị. Agaghị m akatọ ọnụ ọgụgụ a… mgbasa ozi mmekọrịta ịbụ isi okwu isii na-egosi gị ibu o nwere karịa atụmatụ ndị ọzọ. Otu ihe edetu na nke a, ọ bụ ezie na… Social bụ Mobile… Gini mere i ji chee na ị na - eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị kacha karịa? Chọọ? Ee… mana mmekọrịta dị oke mkpa.
Ọhụrụ a Ihe omuma ihe omuma na-enyocha echiche na mgbasa ozi ọha na eze bụ ihe dị mkpa maka ụdị taa, mana eziokwu banyere ihe kpatara CMO ji jụọ ya na ihe ezigbo ike na adịghị ike ya. Kedu ihe dị mma na ihe ọjọọ nke mgbasa ozi mgbasa ozi? Lelee anya nke ọma ma kpuchie onwe gị azụ maka ime ka ọ dị mkpa n'etiti nzukọ gị. Mgbe ahụ, lee ihe ọjọọ anya ma soro ndụmọdụ atọ anyị iji jide n'aka na ị na-egosi uru mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-arụpụta.
Tags: azụmahịa kpisnsonaazụ azụmahịac-ụlọecommerce okporo ụzọemail kari mgbasa ozi mgbasa oziemail na mgbasa ozi mgbasa oziekwentị mkpanakaNyocha banyere ntanetịvideo vidioọrụ mmekọrịtamgbasa ozi na-elekọta mmadụelekọta mmadụ na mobileazụmahịa azụmahịaihe ntinye mmaduusoro mgbasa ozi ọha na ezeelekọta mmadụ media urundị na-ekiri TV
Sep 29, 2014 na 4:43 PM
Ekwesịrị m ikwenye na nkwupụta ahụ banyere ịmata mkpa ọ dị mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta. Ọtụtụ ụlọ ọrụ amaghi mmetụta mgbasa ozi mgbasa ozi, ma ọ bụ enweghị ya, nwere ike inwe na azụmaahịa ha.
Dee 24, 2014 na 5: 31 AM
Ezigbo Douglas ntụnyere gị n'etiti ezi na ihe ọjọọ gbasara mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta kụrụ ntu ahụ. N'ezie emechaala m ihe na-edoghị m anya site na ntụnyere gị gbasara ụfọdụ ihe m bu n'obi n'oge gara aga.